Rahoviana indray no tsy miasa? | NewsMada
Rahoviana indray no tsy miasa?
Par Taratra sur 11/01/2018
Kamo miasa ny Malagasy… Tena faran’izay kamo miasa isika. Tsy fantatra intsony na tarazo na toetra raiki-tampisaka na efa kolontsaina mihitsy no mahatonga an’izany. Hafaliana hita soritra ivelany mihitsy raha vao misy ny andro tsy hiasana. Mainka moa fa hoe ny fanjakana no manome izany fa tsy voafaritra mialoha ao anaty kalandrie, aoka fotsiny!
Andro natokan’ny fanjakana tsy niasana omaly, fa hoe fanadiovana faobe. Efa voalaza mialoha iny ka tsy maintsy notanterahina. Misy tokoa ny nanadio ary maro ny mody nanadio. Ny tena zava-dehibe hoan’ny rehetra, andro tsy fiasana omaly…
Tsy haka ohatra lavitra, fa aleo ny tamin’ny roa herinandro lasa fotsiny no todihana. Andro fiasana soa aman-tsara ny 26 desambra, ampitson’ny Noely, sy ny 2 janoary, ampitson’ny taom-baovao. Mba firy anefa no niasa? Tsy nisy na zara raha nisy biraom-panjakana nisokatra tamin’ireo andro ireo. Zara raha nisy magazay nisokatra. Ny mpanao asa tanana madinika tsy hita popoka… Tsy vita hatreo, namoaka fanambarana ny minisiteran’ny Fanabeazana fa tsy mianatra ny mpianatra, ho fitsinjovana azy ireo amin’ny loza mety ateraky ny rivo-doza. “Ary miasa ve ny mpiasa?” ny fanontaniana heno etsy sy eroa…
Iaraha-mahita sy mahatsapa ny tsy fifehezan’ny fitondram-panjakana intsony ny toe-draharaha ara-toekarena, ka mampitontongana izaitsizy ny fari-piainan’ny Malagasy amin’izao fotoana izao. Manampy trotraka izany anefa ny tranga voajanahary toa ny rivo-doza, sy ny aretina toa ny pesta izay nampitondra faisana, farany teo.
Fa na tapitra hifandimby hitondra ny firenena eo aza ireo heverina fa mahafehy izany, tsy ho vitan’olom-bitsy mihitsy ny manarina toekarena efa midaraboka, miaraka amin’ny mponina kamo miasa.
Soa fa mahay mitsikera, manome tsiny, manondro molotra ary manazera ny lesoka any amin’ny hafa kosa isika. Saika hadino, voalohany amin’ny fangatahana fanampiana ihany koa. Zara aza misy loza sy atambo mihatra, hiandrasana fanampiana avy any ivelany. Dia mbola mahagaga ve raha manana ny vazaha, ny sinoa, ny karàna sy ireo vahiny enjehantsika lava? Tsy hay aloha, fa aleo miandry ny andro tsy fiasana manaraka indray, hakana aina…